အခြောက်လှန်းစက် - Twesix
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ Professional အစားအစာခြောက်စက်စက်နှင့်အစားအစာခြောက်သွေ့စေသောအဖြေပေးသူဖြစ်သည်။
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ အခြောက်လှန်းစက်.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Twesix.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Twesix.
Twesix သည်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်သည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆေးကြောခြင်း, ချိတ်ဆက်ခြင်း, debugging နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းခံရဖို့လိုသည်။.
Roselle Tsix DPHG150s-g
ပန်းပွင့်အေးခဲသောခြောက်သွေ့စက်ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြောက်သွေ့သောပန်းများအတွက်ရေခဲသေတ္တာကိုအေးခဲစေသည့်အရာအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည်။ ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်၏ပထမဆုံးကာလသည် 20-30 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ ထိုအခါပန်းများမှအစိုဓာတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖယ်ရှားခြင်း။ ထိုအရာကဲ့သို့ခြောက်သွေ့သောပန်းများသည်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အရောင်များဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည်။
Howquerity not exphg080808080s-G လက္ကားလက္ကား
နနွင်းကိုအမွှေးအကြိုင်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အိန္ဒိယ Esperially အိန္ဒိယ, ထိုင်း, သီရိလင်္ကာစသည်တို့တွင်နနွင်းများအနေဖြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၌အမှုန့်များပြုလုပ်ရန်နနွင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စိုက်ပျိုးကြသည်။ dehydrator မှနနွင်းခြောက်သွေ့နိုင်မည်နည်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမှုန့်များအမှုန့်များပြုလုပ်ရန်, ခြောက်သွေ့ခြင်းမပြုမီနနွင်းကိုအချပ်များချပြီးခြောက်သွေ့သောအပူချိန်နှင့်ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်နှင့်ခြောက်သွေ့သောအချိန်ကိုခြောက်သွေ့စေခြင်း။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ, Tsix ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ။
အပင်များသည်ခြောက်သွေ့စက်ကိုခြောက်သွေ့စေပြီး Tsix DPHG080S-G ကိုခြောက်သွေ့စေသည်
Tsix Herb Dryer သည်ပူစီနံ, parsley, ပင်စိမ်း, နံရိုး, ယေဘုယျအားဖြင့်ဤသွေ့ခြောက်သောအရွက်များကိုကျန်းမာရေးသောက်သုံးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ dehydrated ဖြစ်စဉ်တွင်ခြောက်သွေ့စက်သည်အရောင်, အာဟာရနှင့်အရသာအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ0င်သည်။ ထို့ကြောင့်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် dehumdifying funtings များကိုခြောက်သွေ့သောစက်ဖြင့်ပိုင်ဆိုင်ရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Herbsydrator ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်သားကောင်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဖယ်ရှားရန်ထိရောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
အပူပိုင်းဒေသသစ်သီးများ dehydrator, ပူပြင်းတဲ့လေထုအပူစုပ်စက်ခြောက်စက်ခြောက်စက်ခြောက်စက်ခြောက်စက်ခြောက်စက်ချိန်ခန့်, ခြောက်သွေ့ခြောက်သွေ့အချိန်အတိုက်အခံ။ သန္ဓေသား, ခြောက်သွေ့သောငှက်ပျောသီးခြောက်သွေ့ခြင်း, ခြောက်သွေ့သောငှက်ပျောသီးခြောက်သွေ့ခြင်း,- အပူချိန်သည်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာပြီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်မထိခိုက်ပါ- အလယ်အလတ်ညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သက်ဆိုင်သောစစ်ဆင်ရေး- အပူချိန်မြင့်မားခြင်း,-ENERMENSERS-stable 15 နှစ်အဘို့အပြေး
အစားအစာခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းကိရိယာများတွင်အပူစုပ်စက်ခြောက်စက်, ခြောက်သွေ့သောအခန်း, စက်တင်ဘာများ, အဆင့်တစ်ခုစီသည်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံကို အခြေခံ. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအတွက်တပ်ဆင်ခြင်းကိုရိုးရှင်းစေသည့်အစားအစာခြောက်သွေ့ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဒီဇိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းမွမ်းမံသည်။ အစားအစာခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုပူပြင်းသောလေခြောက်ရိတ်စက်, ခြောက်သွေ့သောအခန်း, ပန်ကာမြို့ရိုးနှင့်လျှပ်စစ်ကွိုင်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထို့အပြင် Tooles နှင့်တံဆိပ်ခတ်ကော်များသည်ဖောက်သည်များအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည်။
Tsix China Onion Dehydrator သည်ကြက်သွန်နီကိုအမှုန့်များသို့ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်များသို့အမှုန့်သို့အမှုန့်ထဲသို့ခြောက်သွေ့စေခဲ့သည်။ -Dphg050s-G
ကြက်သွန်နီကိုအသုံးပြုပြီးကြက်သွန်နီအလွှာသည်အမှုန့်အတွင်း၌ makde ဖြစ်နိုင်သည်, ကြက်သွန်နီကိုခြောက်သွေ့ခြင်းမှာ6မီလီမီတာကိုခြောက်သွေ့ပြီးခြောက်သွေ့သောကြက်သွန်နီများထွက်လာသည်
စက်မှုလုပ်ငန်း Chow အဓိကခြောက်သွေ့စက်စက်ထုတ်လုပ်သူ DPPG050s-G Tsix
ဆန်ခေါက်ဆွဲ, အာလူးခေါက်ဆွဲ, pasta pasta chow mein ချက်ပြုတ်မတိုင်မီ Mein.generally ကို chow လုပ်ဖို့ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်, ခေါက်ဆွဲ dried လိမ့်မည်။ ခေါက်ဆွဲများကိုကြာကြာထိန်းသိမ်းထားရန်ခေါက်ဆွဲများကိုအစိုဓာတ်နည်းစေရန်ခေါက်ဆွဲများကိုခြောက်သွေ့စေသည်။ အခြားသူများကိုအလွန်အစိုဓာတ်မပေါက်ပါလိမ့်မည်။ Tsix Noodle Dehydroator အားဖြင့်၎င်းသည်အရသာကိုအာမခံနိုင်ရုံသာမကခေါက်ဆွဲ၏အာဟာရကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ အဓမ္မခြောက်စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည် 60-70% စွမ်းအင်ကိုချွေတာနိုင်သည်။
မွန်ဂိုလီးယားတွင် 300kg ပင်လယ် berry berry ခြောက်သွေ့သောစက်
Twesix အခြောက်ခံစက်သည်အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်သို့မဟုတ်အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသောပင်လယ်ရေကိုအနိမ့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးအနေဖြင့်ရေဓာတ်များကိုပေးနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပူပြင်းသည့်လေပူသည် 50 မှ 60 ℃ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့ခြောက်သွေ့ခြင်း, 20 သို့မဟုတ် 50 ℃ Shelf flate အပူချိန်ကိုအေးခဲစေခြင်း, ရေဆုံးရှုံးမှု, စုစုပေါင်း phenolic ဒြပ်ပေါင်းများ, carotenoids နှင့်ဗီတာမင်စီကိုခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့မှုအပြောင်းအလဲများတွင်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဗီတာမင်အီးသည်ခြောက်သွေ့သောအဆုံးနှင့်အဆုံးမှာဆုံးဖြတ်သည်။Twesix အခြောက်ခံစက်သည်ရေခဲသေတ္တာစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပူချိန်ကို 30 မှ 75 ဒီဂရီအထိအလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် 30-40 at တွင်အပူချိန်နိမ့်ကျခြင်းအတွက်ရေငုပ်သင်္ဘော Berry ကိုအလွန်ခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ လေပူသည် 50 at တွင်ခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သောအခြောက်ခံစက်များတပ်ဆင်ထားသည်။
Apricot Apple သင်္ဘောသဖန်းသီး -DPHG050S-G ကိုခြောက်သွေ့စေရန် 300-500kg သစ်သီးခြောက်စက်
1. ခြောက်သွေ့စက်သည်အစားအစာခြောက်သွေ့ရန်ခြောက်သွေ့ခန်းထဲသို့စီးဆင်းသောလေပူကိုပေးသည်။၂။ ခြောက်သွေ့ခန်းသည် ၁၀ စင်တီမီတာ Polyurethane မြှုပ်စာရွက်ဖြစ်ပြီးလုံခြုံ။ သန့်ရှင်းသည်။၃.၄ trolleys များသည်သံမဏိ 201 သို့မဟုတ် 304 ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသံမဏိ ၃၀၄ ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။၄။ ပန်ကာများနှင့်ပန်ကာနံရံသည်အပူပေးသောလေကိုပင်ခြောက်သွေ့စေသည့်အခန်းတစ်ခွင်၌လေထဲသို့မှုတ်သည်။
Dehumidifier နှင့်အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အတူ TSIX အဆက်မပြတ်ငရုတ်သီး Conveyour ခါးပတ်ခြောက်စက်
Twesix အစားအစာပေါ်ကိုခါးပတ်လေမှုတ်စက် mesh သာခန်းခြောက်နိုင်သည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပူစုပ်စက်လေမှုတ်စက်မှချိတ်ဆက်, ဒါပေမယ့်လည်းအပူ dehumidify နှင့်ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။ dehumdifying funtion ပိုင်ဆိုင်ပါကခြောက်အစားအစာများ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်ပေးနိုင်သည်။ အပူပြန်လည်နာလန်ထူလွန်းစွမ်းအင် consumptio ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ exeperience သကဲ့သို့, ဒီဇိုင်း tradtional ပေါ်ကိုခါးပတ်လေမှုတ်စက်ထက် 60-70% စွမ်းအင်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးလွယ်ကူသည်။ တစ်ဦးတည်းသာ PLC controller ကိုအသုံးပြုပုံကမြေတပြင်လုံးခြောက်သွေ့ပစ္စည်းကိရိယာများကို run နိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းကအစားအသောက်စက်ရုံတွေများအတွက်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။အဆိုပါ coveyor ခါးပတ်အစားအစာလေမှုတ်စက် multifuntional ဖြစ်ပါတယ်။ တူညီတဲ့လေမှုတ်စက်သုံးခြင်းအားဖြင့်သူကအဆိုပါ client ကိုသာ PLC အော်ပရေတာအတွက်ခြောက်သွေ့ data တွေကိုပြောင်းလဲပစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စသည်တို့ကိုအသီး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, ပင်လယ်စာ, အသား, ပန်းပွင့်, အခြောက်နိုင်ပါတယ်။အဆိုပါပေါ်ကိုခါးပတ်လေမှုတ်စက်လုံခြုံသည်။ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းနေလည်းမရှိပြီးတာနဲ့စက်အဆိုပါနှိုးဆော်သံမြှင့်သို့မဟုတ်အလိုအလျှောက်အလုပ်လုပ်နေရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် PLC အော်ပရေတာစစ်ဆေးနေအသုံးပြုပုံအကြောင်းပြချက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အမြင့် 500 ကီလိုဂရမ် Freeze Freeer Drying Machine Rose DPHG050s-Gလက်ချhere-Foshan Shunde Shunde Twesix စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အေးခဲသောပန်းများခြောက်စက်များသည်နှင်းဆီ, chrysanthemum, Hollyhock စသည်တို့ကိုစားသောက်ကုန်များ, ဇီဝနည်းပညာနှင့်အလှကုန်ကုမ္ပဏီများအတွက်ခြောက်သွေ့သောနှင်းဆီ,အားသာချက်များ:1 အခန်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော insulation ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အပူစွမ်းအင်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချသည်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည်။2, Multi-process ကိုကွေးခြင်းသိုလှောင်ခြင်း, မျိုးစုံအရင်းအမြစ်ဆည်းပူးခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း, တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်း, စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်ခြင်း, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး, မြင့်မားသောထောက်လှမ်းရေး။Twesix Howedality 500 ကီလိုဂရမ် Freeze Freeer Drying Machine Rose DPHG050s-Gလက်ချhere-Foshan Shunde Shunde Shunde Twesix Energy COUTE TWESIX Energy Co. , Ltd